Working Principles pamusoro Dryair Products - Hangzhou DryAir Treatment Co., Ltd
Mukurima pezvakaitwa, ari pusa mugumisiro mwando pamusoro mishonga yagara matambudziko ...
Air dehumidification ndiko chinhu chine musoro chisarudzo uye anogona kuitwa nzira akawanda: nzira yokutanga kutonhora mhepo pazasi ayo dova pfungwa uye achibvisa mwando kubudikidza condensation. Nzira iyi ndiyo inoshanda pasi ezvinhu apo dova pfungwa iri 8 - 10 Haiwa C kana kupfuura; nzira yechipiri rokutora kuti mwando pedyo desiccant zvinhu. Ceramic fibers ose akaiswa mushonga wokuuraya porous hygroscopic yomuchipatara vari muzvikamu wouchi-zvakadai dzokumhanya. The dehumidification mamiriro iri nyore, uye anogona kusvika -60 Haiwa C zvichidzika kuburikidza chinokosha mubatanidzwa desiccant zvinhu. The kutonhora Nzira unoshanda kuti mafomu diki kana apo mwando pamwero iri zvine mwero dzinodzorwa; nokuti makuru mafomu, kana apo mwando pamwero anofanira kudzorwa kuti yakaderera chaizvo sandara, desiccant dehumidification kunodiwa.
DRYAIR Systems anoshandisa kutonhora nzira michina, uyewo desiccant mavhiri cellular mamiriro. Sezvinoratidzwa nomufananidzo, injini inobudisa desiccant vhiri kuti tenderera 8 kusvika ka18 paawa, uye anoramba absorbs mwando kuburikidza patsva chiito, kupa mhepo yakaoma. The desiccant vhiri yakakamurwa kupinda mwando nzvimbo uye pakuberekwa kutsva nzvimbo; pashure mwando iri mhepo yabviswa munzvimbo mwando kunharaunda vhiri, zviri blower anotuma yakaoma mhepo mumba. The vhiri wakati kunyura mvura rotates kuti pakuvandudzwa kwezvinhu nzvimbo, uye ipapo regenerated mhepo (mhepo inopisa) akatumwa pamusoro vhiri kubva neizvi nenhungamiro, kudzinga mvura, kuti vhiri anogona kuramba kushanda.
The regenerated mhepo huru ine kana chiutsi Heaters kana dzemagetsi Heaters. Nokuda dzinokosha ehupfumi ose Super silicone gel uye samolecular-nomusero ari desiccant vhiri, DRYAIR dehumidifiers anogona kuona kuramba dehumidification pasi yakawanda mhepo vhoriyamu, uye zvinodiwa yakaderera chaizvo mwando kugutsikana. Kuburikidza enzanirana uye mubatanidzwa, kuti mwando zviri zvakaipa mhepo kunogona kuva zvishoma pane 1g / makirogiramu mhepo rakaoma (akaenzana dova pfungwa tembiricha -60 Haiwa C). DRYAIR dehumidifiers murwire kwazvo kuita iri kunyange nani richiratidzwa pasi mwando runyararo. Kuchengetedza mudanga tembiricha iri rakaoma mhepo, zvinokurudzirwa kuchitonhora pasi kana vakuchidzire dehumidified dzedenga kugadzwa mhepo-kutonhodza michina kana hita.
2.Principle zvokushandisa VOC kurapwa:
Chii VOC concentrator?
VOC concentrator anogona zvinobudirira muzvinatse uye pfungwa VOCs makaremerwa mhepo rukova aneta maindasitiri mafekitari. Nokupiwa pamwe incinerator kana solvent kupora zvokushandisa, zvose pakutanga uye anodawo mari yose VOC abatement mamiriro anogona zvikuru kuderedzwa.
VOC wevasungwa rotor chakagadzirwa reuchi inorganic bepa somunhu substrate, umo High-Silica zeolite (Molecular nesefa) iri akaiswa mushonga wokuuraya. The rotor rakakamurwa kuva 3 zvikamu zvakadai muitiro, desorption uye kutonhora munyika dzine parutivi casing mamiriro nokupisa kuramba mhepo chisimbiso. The rotor kunoramba zvayaitenderera paguyo panguva optimum kutenderera nokumhanya pedyo dzakagadzirirwa motokari.
Wechikoro VOC concentrator:
Kana VOC vakaremedzwa chiutsi gasi ichipfuura kwacho mapazi ari rotor iro ichi- zvayaitenderera paguyo, ari incombustible zeolite ari rotor absorbs VOCs uye Yakanatswa gasi ndiyo vaneta kuti ambient; VOC woga chikamu rotor riri ipapo zvayaitenderera paguyo kune desorption rokufambira, apo zvakawanda VOCs inogona desorbed pamwe shoma yakakwirira tembiricha desorption mhepo uye kusimbiswa kuti mukuru wevasungwa pamwero (1 kusvika 10 times). Zvadaro, mukuru kuramba VOC gasi iri kune zvakakodzera romukova kurapwa hurongwa hwakadai incinerators kana kupora gadziriro, kuti desorbed chikamu rotor iri mberi zvayaitenderera paguyo kuti kutonhora rokufambira, uko mapazi ari dzaserera neDare kutonhora gasi. A chikamu VOC makaremerwa chiutsi gasi kubva fekitari inopfuura nomunyika kutonhora mapazi uye ari kune imwe kupisa exchanger kana hita kuti neshungu uye kushandiswa sezvo desorption mhepo.